Ukuma kwe-three-dimensional kwaholela ekukhanyeni kwephahleni,Ukukhanya Kwelanga Lokukhanya,Guzheng Town Led Home Decorative,Constant Current Led Products - I-China Ukuma kwe-three-dimensional kwaholela ekukhanyeni kwephahleni, Umkhiqizi nomhlinzeki
1. Ukuma kwe-three-dimensional kwaholela ekukhanyeni kwephahleni
2. Isikhanyisi se-LED esiyindilinga
3. Ukukhanya kwendlalelo ye-LED yesikwele nesigxathu
4. I-hexagon LED ekhanyayo ukukhanya
Ukuma kwe-three-dimensional kwaholela ekukhanyeni kwephahleni. Amalungiselelo okukhanyisa ukukhanya kwe-LED yindlela ephelele yokuletha ukukhanya, uhlamvu, nokubukeka okuphelile ngokwesikhala sakho. Ukukhanyisa ukukhanya kwe-LED kuyinto enhle, esebenzayo kakhulu, futhi ngokuyisondlo yesondlo. I-Lightology inikeza izinhlobonhlobo zokunquma ukukhanya kwe-LED ukushayela okukhanyisa ukukhanya okukhanyayo okuhlinzeka ngokukhanyisa okukhanyayo, okumemezayo, okwenziwe amandla okwenza izilungiselelo zangaphakathi. Engeza ukufinyeleleka kumklamo wakho wesimanje nge-LED eduze kwezitsheni zokufakelwa kusuka kumiklami yemiklamo njenge-Tech Lighting, i-Artemide, i-Swarovski, i-Leucos, i-Lightology Collection, nokuningi. Ngaphambi kokuba uthenge qinisekisa ukuthi ukhetha ukulungiswa kwelayili elilinganiselwe ngesilinganiso segumbi.( Ukuma kwe-three-dimensional kwaholela ekukhanyeni kwephahleni )
Ukuma kwe-three-dimensional kwaholela ekukhanyeni kwephahleni
©2005-2018 Karnar Xhumana nathi Imephu yesayithi Last modified: March 05 2021 03:41:46.